Ihe ị ga -ahụ na La Gomera, otu n'ime ndị mara mma n'etiti agwaetiti Canary | Akụkọ njem
Ihe ị ga -ahụ na La Gomera
Louis Martinez | | España, Islands
Ihe ị ga -ahụ na La Gomera bụ ajụjụ ọtụtụ ndị na -akwado ịga agwaetiti Canarian a na -ajụ onwe ha. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, ebe ọ bụ otu n'ime ndị ama ama ama n'agwaetiti Spanish a, na, n'ezie, eleta ya obere karịa Tenerife (ebe a ka anyị hapụrụ gị. akụkọ gbasara Tenerife) ma ọ bụ Gran Canaria.
Agbanyeghị, La Gomera na -ejupụta na ịma mma ebe niile. Ekwuputara Nchịkwa ihe okike nke Biosphere na 2012, ọ na-enye gị ogige ntụrụndụ eke, obodo nta juputara na amara na ihe ncheta na-atọ ụtọ, osimiri dị egwu na ihe dị iche iche dịka mkpọpụta rọba ama ama. Nke ikpeazụ bụ ụdị nkwukọrịta nna nna nke ndị aborigine nke agwaetiti ahụ jibu ma kwupụta Ihe Nketa Uwa. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ị ga -ahụ na La Gomera, anyị na-agba gị ume ka ị nọgide na-agụ ihe.
1 Ihe ị ga -eleta na La Gomera: site na Garajonay ruo San Sebastián mara mma
1.1 Garajonay National Park
1.2 Ihe ncheta eke ndị ọzọ ị ga -ahụ na La Gomera
1.3 Osimiri kacha mma na La Gomera
1.4 Alajeró, n'etiti nnukwu ugwu
1.6 Vallehermoso, obodo kachasị na La Gomera
1.7 Nnukwu Ndagwurugwu Eze
Ihe ị ga -eleta na La Gomera: site na Garajonay ruo San Sebastián mara mma
Anyị ga -ebido njem nlegharị anya nke agwaetiti a nke Canary na -eleta ihe ịtụnanya ebumpụta ụwa dịka Garajonay National Park iji gaa n'ihu na -ahụ ebe dị ịtụnanya wee gwụchaa na San Sebastián de la Gomera, isi obodo agwaetiti ahụ.
Garajonay park okike
Ihe ịtụnanya a nke okike nwere ihe karịrị 10% nke agwaetiti ahụ ma ọ dị na etiti ya. Ogige ahụ na -enweta aha ya site na nzuko nke na -achị ya, nke Garajonay, nke, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita XNUMX, bụ ugwu kachasị elu na La Gomera.
Kwusara Ihe Nketa Uwa, a eke ohere mejupụtara tumadi nke laurel ọhịa, nke a na -ahụta ka ọ bụrụ ezigbo ihe okike. Ha na -abụkarị nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma na -apụ n'anya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile. Ihe mejupụtara ha bụ fayas, heather, ferns na laurels, ọkachasị.
Ụzọ kacha mma ị ga -esi mata ogige a bụ ịga ije. Ị nwere ọtụtụ ụzọ akara akara nke ọma na -agafe na ya. Na mgbakwunye, n'ime gị nwere mpaghara ntụrụndụ nke Nnukwu ọdọ mmiri na ebe akpọrọ Egwuregwu bọọlụ, nke ime obodo Ọ bụ, ị ga -ahụ ebe ndị ọbịa.
Ihe ncheta eke ndị ọzọ ị ga -ahụ na La Gomera
Ugwu nke Alajeró
Agbanyeghị, Garajonay abụghị naanị mmasị eke na agwaetiti Canarian a. N'ebe ugwu ka Majona natural park, ebe mbuze na -emepụta nnukwu ndagwurugwu ma nwee ụdị anụ ọhịa.
Ihe ncheta eke eke dịka nke Nkume ọcha, nke Loin nke Carretón ma obu nke Ndị Caldera. Nke ikpeazụ bụ cone mgbawa ugwu kacha echekwa n'àgwàetiti ahụ. Mana, ikekwe, nke kacha adọta uche gị bụ nke Akụkụ ahụ, ụfọdụ na -akpụgharị na nkume dị elu na -emepụtaghachi ọkpọ nke ngwa a.
Na nkenke, ọ gaghị ekwe omume ịgwa gị gbasara ihe ịtụnanya niile dị na La Gomera. Mana anyị ga -ekwukwa maka nchekwa eke Puntallana na Benchijigua, ebe echekwara Orone, saịtị mmasị sayensị nke Cliffs nke Alajeró na Charco del Conde, yana ogige ime obodo nke Valle Gran Rey, yana ọnụ ọnụ ya na ndagwurugwu ya. kpuchie ya na mpụga.
Osimiri kacha mma na La Gomera
Osimiri La Calera na ọnụ ọnụ ugwu la Mérica
Anyị enweghị ike ịgwa gị ihe ị ga -ahụ na La Gomera na -akwụsịghị na oke osimiri ya dị ebube. Ha niile nwere ájá gbara ọchịchịrị, mana nke a anaghị eme ka ha maa mma ma ọ bụ kwado maka ụlọ ịsa ahụ. N'ezie, agwaetiti ahụ nwere ụfọdụ kacha mma na Canaries (ebe a ka anyị hapụrụ gị akụkọ gbasara osimiri nke agwaetiti).
N'ebe ugwu nke agwaetiti ahụ ị nwere osimiri nke oghere ahụ na Hermigua. Ọ bụ naanị narị mita abụọ nke ájá mgbawa, mana nke ahụ na -enye ya ọmarịcha karịa. Na mgbakwunye, a na -echebe ya site na ebili mmiri, nke na -eme ka ọ dị mma maka igwu mmiri. Ọ dị nso bụ osimiri nke Santa Katalina, nke zuru oke maka egwuregwu mmiri dị ka sọọfụ, n'agbanyeghị na o nwekwara ọdọ mmiri eke mara mma. Mana, ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka ụdị ebe ndị a, ọ ka mma bụ nke Ogige mmiri Vallehermoso.
Banyere ndịda La Gomera, anyị na -akwado osimiri nke La Kalera na Inglés Ọ dị na Valle Gran Rey. Nke mbụ n'ime ha zuru oke ka gị na ụmụaka soro n'ihi ebili mmiri ya dị ala, ebe nke abụọ ka a na -ewere dị ka nke kacha mma n'àgwàetiti ahụ. Ọ dị n'okpuru nnukwu ugwu dị egwu ma na -ejigide ikuku na -amaghị nwoke. N'aka nke ọzọ, na Alajeró ị nwere osimiri nke Santiago, dị mma maka ndakpu mmiri n'ihi akụnụba ọrụ ugbo ya, na San Sebastián de La Gomera ị ga -ahụ nke obodo n'onwe ya, nke Ndị Guancha na nke Ọgba, a na -amata nke ikpeazụ site na ihe ncheta ọkụ ọkụ Olympic.
La Guancha bụ ụsọ mmiri gba ọtọ, mana ọ bụghị naanị ya n'agwaetiti ahụ. Enwekwara nke Tapahuga, Chinguarime, Argaga, El Guincho, El Cabrito na las Arenas, n'etiti ndị ọzọ.
Alajeró, n'etiti nnukwu ugwu
Mgbe anyị mechara ezigbo akụkụ nke agwaetiti Canary, anyị na -aga ileta ụfọdụ obodo ya, nke dị mkpa gbasara ihe anyị ga -ahụ na La Gomera. Anyị ga -amalite na Alajeró, nke dị n'agbata oke ugwu (n'ezie, ọ nwere mpaghara ogige Garajonay), mana ịnweta oke osimiri site na ọnụ ọnụ ugwu dị egwu.
Alajeró bụ nleta ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu, ebe ọ bụ na okwu ọchịchị ya bụ Ọdụ ụgbọ elu La Gomera. Agbanyeghị, ị nwekwara ike ịhụ na mpaghara mara mma ụlọ ụka El Salvador, wuru na narị afọ nke XNUMX na Ihe ngosi nke Nwanyị Nwanyị anyị Nwaanyị El Paso, onye nlekọta obodo.
Nlele nke Hermigua, otu n'ime obodo ịhụ na La Gomera
N'ịbụ nke dị n'akụkụ ugwu nke agwaetiti a, obodo a bụ ebe obibi Ebe ngosi ihe mgbe ochie nke La Gomera, nleta dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata ọdịnala agwaetiti ahụ na ogige Los Telares na -akwado ya. Ọzọkwa, ị nwere ike ịhụ ihe Ebe obibi ndị mọnk nke Santo Domingo de Guzmán, wuru na 1598; ụlọ nsọ nke San Juan na ụka nke nbanye, ọmarịcha ụlọ nsọ nke na-agwakọta ụdị neo-Gothic na neo-Byzantine.
Mana nnukwu akara Hermigua bụ Roques de Pedro na Petra, ugwu abụọ na -akpali akpali nke nwere akụkọ nke ha. Dika nke a siri kwuo, ha bụ ndị hụrụ abụọ n'anya nke ọkụ amamiri tụgharịrị bụrụ okwute.
Vallehermoso, obodo kachasị na La Gomera
Nlele nke Vallehermoso
Onye dị ebube chebere ya Rnke Cano, obodo Vallehermoso nwekwara ihe ncheta eke sitere na Los Órganos, nke anyị gwarala gị maka ya. Mana ọbịbịa gị n'ime obodo ga -amaliterịrị ọmarịcha ya Iwu Plaza, ndị kansụl obodo na-elekọta ya na mbara ihu nke ụdị Canarian na ụlọ mmanya juru.
Ọzọkwa, ị ga -ahụ nke ahụ chọọchị nke San Juan Bautista, ụlọ nsọ neo-gothic nke narị afọ nke XIX; Ọmarịcha Ogige Nchọpụta Botanical, nke nwere ụdị sitere n'akụkụ ụwa niile na foduru nke Castillo del Mar. Nke ikpeazụ a bụ akụkụ nke ụgbọ mmiri na -eburu ụgbọ mmiri e wuru na njedebe nke narị afọ nke XNUMX maka mbupụ unere, nke enwerekwa nke a na-akpọ Vallehermoso davit.
Nnukwu Ndagwurugwu Eze
Dị n'okpuru ụkwụ nke nnukwu ugwu ebe ama ama ọkpọ ọkpọ, Valle Gran Rey na -enye gị ọmarịcha ịkụ azụ na ọdụ ụgbọ mmiri egwuregwu. Mana ị nwekwara ike ịhụ n'obodo a akwụkwọ nsọ nke ndị Eze dị nsọ, nke e wuru na mmalite narị afọ nke XNUMX, na Echiche Palmarejo, nke onye na -ese Lanzarote César Manrique mepụtara nke na -enye gị echiche dị egwu banyere ndagwurugwu a mara mma.
Ọ bụghị naanị ya ka ị ga -ahụ na mpaghara ahụ. N'ezie, La Gomera bụ agwaetiti echiche. Anyị na -akwadokwa Santo, Curva del Queso na La Retama. N'ikpeazụ, na Sọnde nke abụọ nke ọnwa ọ bụla ị nwere ahịa nka na -ekpo ọkụ n'obodo.
Anyị gwụchaa njem nlegharị anya n'àgwàetiti ahụ n'isi obodo ya mara mma. San Sebastián de la Gomera bụ obere obodo nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku mmadụ iri jupụtara na ya. Anyị agwabuola gị gbasara ọmarịcha osimiri ya, mana o nwekwara ọtụtụ ihe ncheta.
Ọzọkwa, anyị ga -agwa gị na ya onwe ya, n'ozuzu ya, bụ ihe ncheta. Ọ na -agbago n'ugwu dị n'ụsọ osimiri ma jupụta n'okporo ụzọ yana ụlọ ndị Canarian. Mana anyị na -adụ gị ọdụ ka ị gaa leta Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị nke Mwere, onye malitere na narị afọ nke XNUMX, n'agbanyeghị, n'ihi mwakpo ndị ohi mmiri, a ga -ewughachi ya ọtụtụ oge. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ na -agwakọta ụdị Gothic, Mudejar na Baroque. Na mgbakwunye, n'ime gị nwere ụfọdụ frescoes mara mma.
N'otu oge ahụ bụ nke Ọnụ Countlọ Elu, weere akara nke La Gomera. Ejiri okwute ọcha na -acha uhie uhie rụọ, ọ bụ ebe nchekwa siri ike nke e mechara mee dị ka ebe nnabata maka ndị mmadụ. Ugbu a, ọ nwere ihe ngosi eserese nke agwaetiti ahụ.
Kwesịrị ị na-eleta ndị Columblọ Columbus, ụlọ nke narị afọ nke XNUMX. Ọ na -enweta aha a n'ihi na onye ọkwọ ụgbọ mmiri jiri ụlọ ahụ dịbu na saịtị a tupu ọ gawa America. Taa ọ bụ ụlọ ebe ngosi nka mara mma nke nka tupu Columbian.
N'akụkụ aka nke ọzọ, hermitage nke San Sebastián E wuru ya na narị afọ nke XNUMX wee nwee onyinyo nke onye nsọ nke na -enye ya aha na onye bụ onye na -elekọta La Gomera. Mana nke mara mma karịa bụ ụlọ nke olulu mmiri Aguada ma ọ bụ Omenala. A na -ekwu na Columbus na -a theụ mmiri nke o ji gọzie New Continent. Ọ pụtara maka ụdị omenala ndị Canarian na ugbu a nwere ebe ngosi nka raara nye njem ndị ọchịagha.
Plaza de América, na San Sebastián de La Gomera
Ọtụtụ n'ime ihe ncheta ndị a dị n'ime ezigbo okporo ámá, nke kachasị mkpa na San Sebastián de la Gomera. A na -akwagharị ya wee jupụta n'ụlọ ahịa, ụlọ mmanya na ụlọ nri. Mana, karịa ihe niile, ọtụtụ ụlọ ndị Canarian na -emepụta ya dịka Los Quilla, Los Condes ma ọ bụ Casa Darias.
N'ikpeazụ, n'ime ụlọ narị afọ nke XNUMX ị nwere Museumlọ ihe ochie nke La Gomera, nke nwere ntụrụndụ ebe ịchụàjà Guanche na ihe ndị ọzọ nke ọdịbendị nke ndị agwaetiti ahụ.
Na mmechi, anyị atụleela gị ihe niile ihe ị ga -ahụ na La Gomera. Dịka ị ga -ahụ, ọ bụ agwaetiti mara mma ebe ị ga -enwe ọmarịcha ọdịdị ala, osimiri dị jụụ na ihe nketa dị egwu. Ugbu a, ị ga -agba onwe gị ume ileta ya wee gwa anyị otu i siri were ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Islands » Ihe ị ga -ahụ na La Gomera
Ihe ị ga -ahụ na Mexico City
Ihe ị ga -ahụ na Nepal